Shariif Sh Axmed oo kulan la qaatay Ergayga qaramada midoobay ... | Universal Somali TV
Shariif Sh Axmed oo kulan la qaatay Ergayga qaramada midoobay u qaabilsan Arimaha Soomaaliya
Madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif shiiq Axmed ahna hogaamiyaha xisbiga Hiil Qaran ayaa kulan la qaatay Khamiista maanta ah wakiil xoghayaha guud ee qaramada Midoobay u qaabilsan Arimaha Soomaaliya Mr James Swan.
Labada dhinac ayaa ka wadahadlay xaalada siyaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Arimaha nabad gelyada iyo hormarada laga gaaray dhanka amniga xaalada uu marayo Dalka iyadoo kulanka ay sidoo kale xaadir ku ahaayeen mas,uuliyiinta kale ee Xisbiga Hiil Qaran.
Kulankaan ayaa imaanaya iyadoo maalmihii la soo dhaafay madaxweynihii hore uu kulamo gaar gaar ah ka waday magaalada Muqqdisho.
Shariif Sh Axmed ayaa bishii hore dowlada Fedaraalka ka hor istaagtay socdaal uu ku doonayay in uu ku gaaro magaalada Kismaayo si uu ugu qeyb galo caleema saarka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo lagu doortay magaalada Kismaayo.
Kan-xigaMadaxweynaha Ismaamulka Puntland oo l...
Kan-horeSacuudiga iyo Imaaraadka oo canbaaree...
53,450,793 unique visits